Ahoana ny fomba fitsaboana ny mpifaninana amiko sy ny mahita ny mpizara vidin-tsarin'i Amazon amin'ny teny fanalahidy?
Andao ho any amin'ny teboka tsy misy hatakandro. Ny fahatsiarovana ny maha-zava-dehibe ny fitazonana ny tenanao foana amin'ny toetr'andro farany indrindra sy ny fandrosoana sangan'asam-peo lehibe indrindra ampiasain'ny mpividy amin'ny aterineto lehibe amin'ny serivisy ambony indrindra any Amazon - eto dia fitaovam-pandraharahana telo ampiasaina ampiasaina ho anao mba hihazakazahana malama, fikarohana fifaninanana. Farany, ny fampiasana ny finday tsara indrindra sy ireo singa manan-danja indrindra amin'ny fifandimbiasana mpifaninana tsara indrindra amin'ny Amazon - lierac mesolift serum opiniones kia. Izany, eto izy ireo.
Google Plane Keyword Planner - tokony ho ny fitaovana fandalinana vaventy anao voalohany ho anao izay afaka manolotra anao avy hatrany ny sary lehibe rehetra Ny sombin-tsarimihetsika mitovy sokajy mitovy amin'izany, izay arotsaka amin'ny habetsahan'ny karoka fikarohana mpitady loharanom-baovaon'izao tontolo izao. Ny zavatra dia ity fitaovana fanalahidy ity dia mety ho tsara ho anao - na dia mila manara-maso ny sangan'asan'i Amazon ho an'ny teny fototra manokana aza ianao. Mazava ho azy, ny Google Keyword Planer dia tsy mora tahaka ny liona anjara amin'ny fitaovam-pikarohana fikarohana sy ny rafitra an-tserasera manokana natokana ho an'ny fanaraha-maso ny mpizara Amazon mpanjifa ho an'ny key key target target. Na dia izany aza, mbola mampiasa io fitaovana fototra io aho, ankoatra ny onjam-peo. Ary mety ho lasa toerana fanombohana tsara ho an'ny fikarohana lalin-danja amin'ny fifaninanana amin'ny Amazon. Mariho anefa, fa ny fampiasana ity fitaovana maimaimpoana maimaim-poana ity ho antsika rehetra dia tsy ho ampy ho anao mpivarotra mahomby amin'ny Amazon. Midika izany fa tsy maintsy misafidy iray fanampiny fitaovana fanaraha-maso ambonin'ity default tokana ity ianao - hieritreretana ireto safidy manaraka ireto raha hanara-maso ny mpizara am-pivarotana Amazon anao amin'ny tenimiafina toy ny tena pro.
SpyFu - fitaovam-pitenenana maimaim-poana manan-danja indrindra natao hijerena ny mpifaninana aminao ary tsy handray soa avy amin'ny fitadiavana tsara indrindra miaraka amin'ny fikarohana siantifika manan-danja, saingy miaraka amin'ny lafiny hafa amin'ny SEO dia azonao eritreretina (i. f. , mombamomba ny teboka, teti-panavaozana amin'ny ankapobeny, ary koa ireo hafa fitantanana hafa azo ampiasaina amin'ny tombontsoanao manokana). Ary azonao atao ny mampakatra mora kokoa ny mpizara vidin-tsarinao any Amazon mba hahalalanao ny teny fototra tena tianao - dia manosika ireo soso-kevitra faran'izay lava sy ho toy ny vidin'ny fifaninanana mivantana avy amin'ny mpanohitra akaiky indrindra ao amin'ny tsenanao na ao anatin'ny sokajy mitovy amin'ny vokatra ao amin'ny Amazon. Angamba ny hany zavatra ratsy momba ny SpyFu dia ny fandikana feno matavy azy dia misy amin'ny 30 dolara isam-bolana. Na dia izany aza, ny dikan-dàlana maimaim-poana azony dia tsara ho ahy, tokony ekeko.
SECOCKpit - dia fitaovana hafa fandinihan-teny maimaim-poana izay afaka manampy anao manara-maso ny fanamarihan'ny Amazon ho an'ny teny fanalahidy sy teny lava fohy ampiasain'ireo mpampiasa mivantana, tsy amin'ny alàlan'ny sehatra elektronika ihany, fa any amin'ny toerana hafa ao amin'ny Internet ao amin'ny Google index. Anisan'ny asany kanto indrindra, nahitako haingam-pandeha haingana indrindra tamin'ny fikarohana teny filamatra. Ny zava-drehetra dia mihazakazaka tsara ary amin'ny fomba tena mahaliana. Miaraka amin'ny SECockpit, ny mpivarotra rehetra any Amazonia dia afaka mahatakatra haingana izay tsara sy izay tokony ho novaina na azo averina indray - araka ny finday tsara indrindra ampiasain'ireo mpivarotra goavam-be ao amin'ny sokajy misy anao amin'ny Amazon, ary angamba amin'ny sehatra ecommerce malaza hafa toy ny eBay, Walmart, sns.